Aခန်း (၁) ပိုက်ဆံချေးခြင်းယင်ကောင်A၇မ်းစိတ်ညစ်နေသည်။စိတ်ညစ်တာမှ…A၇မ်းကိုစိတ်ညစ်နေသည်။ကြည်.လေ….ဘောပွဲရှုံးလို.ပိုက်ဆံလေးများ၇မလားဆိုပြီးတော.ဘိလိယက်ဝင်ထိုးကာမှ လက်ဖက်ဆိုတဲ.ကောင်ကလည်း ဒီနေ.မှ လက်ကောင်းချက်ကတောက်လျှောက်…။ယင်ကောင်ကျန်တဲ.ဘောတွေကိုချည်းရွေးထိုးနေတာမှ ဘယ်ထဲကများငြိုးထားသလဲမသိ….။သူ.လက်ချက်နဲ.ပဲယင်ကောင်တစ်ယောက် ငါးပွဲဆက်တိုက်လျှော်လိုက်၇ပြီးပြီ။Aခုလည်း…ကြည်.လေ။ ယင်ကောင်ထိုးလိုက်လို.ကျန်တဲ.၁၃ ဘောလုံးကို ထိုးဖို. ချောင်းနေ၇င်းကနေယင်ကောင့်ကိုမချိုမချU်လှမ်းပြုံးပြတယ်။ပြီးတော.“ကိုယင်ကောင်ကြီး…ဒါပါနဲ.ဆိုခြောက်ပွဲမြောက်နော်”ဆိုပြီးလှမ်းရိတယ်။“မင်းသာဝင်ေAာင်ထုးပါကွာ…လျှော်၇၇င်လည်းသွေးမနည်းပါဘူးကွ”ိပြောမည်.သာပြော၇တယ်ဒီတပွလျှော်၇၇င် ယင်ကောင်.Aိတ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှဲကျန်တော.မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကောင် မ၀င်ပါစေနဲ.လို.ပဲစိတ်ထက ကြိတ်ဆုတောင်းနေ၇တယ်။ဲဖြစ်ချင်တော.ဘောလုံးကလည်း တည်.တည်.ကြီးကိုဝင်သွားတော.တာပဲ…။ကျင်းနှုတ်ခမ်းလေးတောင်တချက်မထောက်ဘူး။“ပေါ.”မာကာလုပ်နေတဲ. ကုလားလေး ကာစီးက သူ.Aသံပြာပြာလေးနဲ.ထေAာ်တယ်။“ဘယ်လောက်လျှော်၇မှာလည်း” တင်းဆတ်ဆတ်လေသံနဲ.လက်ဖက်ဆိုတဲ.ကောင်ကိုယင်ကောင်လှမ်းမေးလိုက်တယ်။“ဂိမ်းကြေးကတစ်ယောက်ကိုသုံးထောင်ဆိုတော. လေးယောက်ထိုးတာဆိုတော.သောင်းနှစ်ထောင်….ကိုယင်ကောင်ကြီးက ဖဲကဒ်ငါးကဒ်ကျန်တယ်ဆိုတော.တထောင်…Aားလုံးပေါင်းတစ်သောင်းသုံးထောင်ပေါ.ဗျာ…”ေAာင်နိုင်သူလေသံမျိုးနဲ.လက်ဖက်ကပြောတယ်။ “ငါ.Aိတ်ထဲမှာတစ်သောင်းပဲပါတော.တယ်” ပြောပြောဆိုဆိုယင်ကောင်Aိတ်ထဲကပိုကဆံတစ်သောင်းကို ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ လက်ဖက်မျက်နှာတချက်မဲ.သွားပြီ်း“ကဲ ကဲ မရှိတော.တဲ.လူတွေပြန်လို.၇ပြီ…နောက်ပကစပြီး ဂိမ်းကြေးထပ်ထိုးမယ်။ ဘယ်.နှယ်ပိုက်ဆွဲံလာရှာပါတယ်ဆိုမှ Aကြွေးချည်းတိုးနေတယ်"လက်ဖက်ကAားလုံးကိုပြောသလိုလိုနဲ. ယင်ကောင်.ကိုစောင်းပြောတယ်။ လက်ဖက်စကားကြောင်.ယင်ကောင်စိတ်ထမှာ ဖျU်းကနဲဖြစ်သားတယ်။ွဲဟုတ်တယ်လေ…ယင်ကောင်တု.ဘိလိယက်ကိုကြေးစား စထိုးနေတုန်းကလက်ဖက်ဆိုတဲ.ကောင်လေးကိကြူ တောင်မနိုင်သေးဘူး။ဒီနေ.တနေ.လုံး ခူနေလို.သာ…။သေသေချာချာသာထိုးလို.ကတော.လက်ဖက်ဆိုတဲ.ကောင်Aိမ်တောင်ပေါင်သွား၇မယ်။ယင်ကောင်တို.ကသာသာလေးထိုးနိုင်တယ်။ခက်တာကဆက်ထိုးဖို.Aိတထဲမှာ ပိုက်ဆံကတစ်ပြားမှမရှိတော.ဘူး။ ယင်ကောင်ကောင်တာမှာထိုင်နေတဲ.်ခုံပုင်ရင် မချို ကိုလမ်းကြည်.လိုက်တယ်။ မချိုကတပ်ထားတဲ.မျက်မှန်ေAာက်ကနေ မှုန်ဝါးဝါးနဲ.ှိယင်ကောင်.ကိုပြန်ကြည်.တယ်။ “မချို…ခုံကြေးAကောက်ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲ…”တစ်ပြားမှမကျန်တော.ဘူးလေ ယင်ကောင်၇ယ်…ခုနက နင်.ကိုပေးလိုက်တဲ.နှစ်သောင်းက 2.
Aကုန်ပဲလေဟယ်” မချိုကတဆက်တည်း…“နင်ယူထားတဲ.ပိုက်ဆံချည်းပဲတောင်ငါးသောင်းရှိနေပြီ…ညနေကျ ငါ. ယောကျား ကိုကြီးပြန်လာ၇င် ဘယ်လို၇ှင်း၇Uီးမလဲမသိဘူး…”ယင်ကောင်တော်တော်စိတAိုက်သားတယ်…။ဟုတ်တာပေါ. ကိုယ်ကမထိုး၇တာဘာမှမဖြစ်ဘူး။်ွညနေသူ.ယောကျားပြန်လာ၇င် မချိုတစ်ယောက်ဇယားနောက်မှာ….။ ယင်ကောင်ထိုင်ခုပေါ်မှာခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်ချလိုကတယ်…။တဆက်တည်း သက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုံ်ဟူးကနဲနေေAာင်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော.ကြူတံကိုကိုင်ပြီး ဘောလုံးကို ဟိုချောင်းဒီချောင်းလုပ်နေတဲ.လက်ဖက်ဆိုတဲ.ကောင်ကုဂျိုကြည်.ကြည်.ပစ်လိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ…ဒီကောင်.ကြောင်.။ိ“ဟဲ. ယင်ကောင်…”မချို၇ဲ.Aသံကိုကြားလိုက၇တယ်။ ဘာလဲဆိုပြီး သူမချိုကိုမေးဆတ်ပြလိုက်တယ်။်“နင် ဘေးAိမ်ကမနုနဲ.၇င်းနီးလား…မနုကတစ်ခါတစ်လေကျ၇င် ပိုကဆံAတိုးလေးဘာလေးနဲ.်ချေးတတ်တယ်ဟ…”မနု……။မနုဆိုတာက မချိုတို.ဘိလိယက်ခုံ၇ဲ. ဘေးAိမ်က….တောင်.တောင်.ဖြောင်.ဖြောင်.နဲ.Aသားကလည်း၇ခိုင်နဲ.မဂိုစပ်ဆိုတော.ဖွေးနေတာပဲ…။ တင်တွေ ၇င်တွေဆိုတာAယ်နေတာပဲ…။ယင်ကောင်တို.ဆို မနုထီးလေးဆောင်းပြီးလမ်းလျှောက်လာ၇င် နောက်ကနေကြည်.ပြီး တံတွေးတွေမျိုချ၇တာ ခန ခန…။Aသက်ကတော.၃၈နှစ်လောက်ရှိပြီ…ဒါပေမယ်.နုလု.လားမသိဘူး…၃၀လောက်ပဲလို.ထင်၇ေAာင်ကိုနုတယ်…။ ဗျာ….ဘယ်ကလာAပျိုကမှာလည်း…သူ.ယောင်္ကျားကဗိုလ်ကြီး…ဘယ်တိုကပွဲမှဆိုလားက်ျသွားတာ ၃နှစ်လောက်တော.ရှိပြီလို.ပြောကြတာပဲ….။ မုဆိုးမလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီးပေါ.ဗျာ….။သူ.ယောင်္ကျား ဗိုလ်ကြီးထားခဲ.တဲ. စုဆောင်းစာတွေနဲ. Aတိုးလေးဘာလေးပေးစားတယ်။သမီးလေးတစ်ယောက်လည်းရှိတယ်။ သူ.သမီးက ယင်ကောင်တို.နဲ.ကျောင်းနေဘက်…။သမီးကလည်းမေA.ခြေရာနင်းနိုင်ပါတယ်…။ယင်ကောင်တို.ရှစ်တန်းလောက် မှာတင်ပဲသူ.သမီးကတင်တွေ၇င်တွေ တော်တော်ထွက်နေပြီ…။သြော်…နာမည်လား…..။သင်းနုခိုင်တဲ.။သူ.သမီးAကြောင်းနောက်မှ ဆက်ပြောတော.မယ်…တော်ကြာလို၇င်းေ၇ာက်မာမဟုတ်တော.ဘူး…။ှမချိုကဆက်ပြောတယ်…“ငါတောင်ပြီးခဲ.တဲ.လတုန်းက ပိုက်ဆြံ ပတ်သွားလို. သူ.ဆီမှာ တစ်သိန်းလောက်ဆွဲလိုက်၇သေးတယ်”“ဟာဗျာ…ကျွန်တော.ကိုမှသူမသိတာချေးပါ.မလားဗျ”“Aမလေး…နင်.ကိုမသိဘဲမနေပါဘူးဟယ်…ဟိုနေ.ကတောင်ပြောနေသေးတယ်ဟ”“မမနန်းသားတွေကတဲ.ချောချောလေးတွေတဲ. စကားပြောလည်းA၇မ်းယU်ကျေးတာတဲ.”“ယင်ကောင်ဆိုတဲ.ကောင်လေးဆို၇င်တဲ.လူကြီးလေးကျနေတာပဲတဲ.ချစ်စ၇ာလေးတဲ.”“ကျမသားလေးဖြစ်၇င်သပ်ကောင်းမှာပဲတဲ.ိပြောနေတာ…..” 3.
ပြောမယ်.သာပြောတာ…ယင်ကောင်တို.က၇ပ်ကက်ထဲမှာလူချစ်လူခင်တော.ပေါတယ်။ွစကားပြော၇င်ချိုချိုချိုချိုနဲ.ပြောတတ်တော. Aရွယ်စုံက ယင်ကောင်.ဆို၇င်ချစ်ကြတယ်။Aဲ…ဆိုးတာဆိုလို.တစ်ခါတစ်လေ Aပေါင်းAသင်းစုံ၇င် A၇က်လေးဘာလေးသောက်တတ်တာ၇ယ်၊လောင်းကစားဝါသနာပါတာလေး၇ယ်ပဲ၇ှိတယ်…။ဗျာ…Aဆော်ဇယားဟုတ်လား…။ယောင်္ကျားစစ်စစ်ကြီးပဲဗျာ…ဘယ်ကင်းပါ.မလဲ။ ဒါပေသိ…ယင်ကောင်တို.က၇ပ်ကွက်ထဲမှာဘယ်Aဆော်ကုမှလုက်မကြောင်ဘး…။ ဘယ်ကောင်မလေးကိုမှလဲစတာနောက်တာ မလုပ်ဖးဘူး…။ိူAဲဒီတော.Aားလုံးကယင်ကောင်.ဆို၇င် သူတော်ကောင်းလူတော်လေးလို.ပဲထင်ကြတာပေါ. …။Aင်း…သိပဆာလာ၇င်တော. city hotel တို.ဘာတို.မှာသွားရှာစားလိုက်တာပေါ.ဗျာ…။်“Aတိုးကဘယ်လိုယတယ်တဲ.လဲ…မချို” ယင်ကောင် မချိုကိုမေးလိုကတယ်။ူ်“၁၅ကျပ်တိုးလို.တော.ပြောတာပဲ…ဒါပေမယ်.ငါသွားပြောကြည်.ပေးမယ်လေ…၁၀လောက်၇၇င်နင်ယူမလား” ပြောမယ်.သာပြော၇တယ်ယင်ကောင်တခါမှပိုက်ဆံမချေးဖူးဘူး။Aခုဟာကတော.မဖြစ်မနေဆိုတော.ချေး၇တော.မယ်…။ဟုတ်တယ်လေ…ညနေကျလို.မှပိုက်ဆံတွေပြန်မရှင်းနိုင်၇င်ယင်ကောင်.Aတွက်နဲ. မချိုတို.လင်မယား ကွိုင်တက်တော.မယ်…။တစ်သိန်းလောက်ဆို၇င်တော.တစ်လAတွင်းပြန်ဆပ်နိုင်လောက်ပါတယ်လေလို. တွေး၇င်း…မချိုကိုလှမးပြောလိုက်တယ်…။်“Aင်း…သွားပြောကြည်.လိုက်လေ…ယူတာပေါ.”ခနလောက်နေတော.ပျာပျာပျာပျာနဲ. မချိုပြန်ေ၇ာက်လာတယ်။“ဟဲ. ယင်ကောင်ငါပြောခဲ.ပြီးပြီ…နင်.ကိုကိုယ်တိုင်လာခဲ.ပါတဲ.နင်ပိုက်ဆံချေးတာကိုမနုကမယုံဘူးဖြစ်နေတယ်…ဘာဖြစ်လို.လဲတဲ. ဘာကြောင်.ချေးတာလဲတဲ.ငါ.ကိုမေးလိုက်တာစုံနေတာပဲ ။ ငါလည်းပါးစပ်ထတွေ.တာတွေပြောခဲ.တယ်…သွားလိုက်Uး”ဲီဟဲ. သောက်ခွေးငါးပါးတော.မှောက်ပြီ။ မနုကလည်း ဘာတွေမေးမှန်းမသိ…မချိုကလည်းဘာတွေပြောခဲ.မှန်းမသိ….။ကဲ…Aခုမတော.မထူးပါဘူးလေဆိုပြီးယင်ကောင် မနုတို.ခြံဘက်ကူးသွားလိုက်တယ်…။ှမနုတု.ခြံရှေ.ကိုရောက်တော.ိ“Aန်တနေ၇….Aန်တီနု”ီုယင်ကောင်.ေAာ်သံAဆုံးမှာAိမထဲကမနုရဲ.Aသံကိုကြား၇တယ်…။်“၀င်ခဲ.လေကွယ်…တံခါးစေ.ထားတယ်…။”ယင်ကောင်ခြံတံခါးကိုတန်းဖွင်.ပြီးဝင်သွားလိုက်တယ်။Aိမ်ရှေ.Eည်.ခန်းထဲမှာကုလားထိုင်တစ်လုံးပေါ်မှာထိုင်ွေနတဲ. မနုကုAဆင်သင်.တွေ.၇တယ်။ “ထိုင်လေ…သား”ိယင်ကောင်မနု၇ဲ.ရှေ.ကထိုင်ခုံမာ ယို.ယို.လေးဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။မျက်နှာသေလေးနဲ.ပေါ.။ှ“သားကျောင်းကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၇ဲ. Aဖေနာေ၇းကိုကူညီဖို.ပိုက်ဆံလိုလို.ဆို….” 4.
ဟိုက်…သွားပြီ။မချိုဘာတွေ ဖေါထားလဲမသိ….။မတတ်နိုင်ဘူးလေ…ပေါက်တဲ.နဖူးမထူးဘူးဆိုပြီးယင်ကောင်ချော်လဲေ၇ာထိုင်လုက်တယ်…။ိ“သြော်…ဟုတ် ဟုတ် ဟုတကဲ. Aန်တီနု”်“မမနုလို.ပဲခေါ်ပါသား၇ယ်…”ဘယ်.နုယ်…ဒီAရွယ်နဲ.ဒီAရွယ်မမနုလု.ပဲခေါ်ပါတဲ….Aဲဒီတုံးကတော.ဘာကိုမှမစU်းစားမိဘူး။ပိုက်ဆံချေးလို.၇ဖို.ကAဓိကမဟုတ်လား…။မနုကဆက်ပြောတယ်“သားရဲ.စိတ်ဓာတ်လေးကိုတော.လေးစားပါတယ်…ဒါပေမယ်.မမနုတို.ကAများနဲ.Aလုပ်လုပ်၇တာမဟုတ်လား…Aဲဒါကြောင်.လိုAပ်တာလေးတွေတော.လုပ်ထားချင်တယ်ကွယ်…”ပြောပြီးတော.မနု Aိ်မ်ထကိုဝင်သွားတယ်…ပြန်ထွက်လာတော. မနုလက်ထဲမှာ စာချုပ်တစ်စောင်ဲပါလာတယ်…။“ေ၇ာ.သားဖတ်ကြည်.လိုက်Uီး…စာချုပ်ထဲမှာတော. Aတိုးကိုထည်.မချုပ်ထားဘူး”“Aတိုးကဘယ်လိုပေး၇မှာလဲ…Aန်တီ…Aဲ..မမနု”မနုက ငါးသလောက်ပြုံးလေးပြုံးလိုက်တယ်…ပြီးတော.မှ“ပုံမှန်ကတော.တစ်လကို၁၅ကျပ်တုးယူတယ်…သားနဲ.တော.ပြောစ၇ာမှမလိုတာ နောက်မှပြောကြတာပေါ.”ိ“သြော်…ဟုတ်ကဲ.Aန်တီကျေးဇူးAများကြီးတင်ပါတယ်…”ပြောပြီး ယင်ကောင်မနုပေးတဲ. ပိုက်ဆံတစ်သိန်းကို ယူပြီးထထိုငလိုက်တယ်…်“သွားပါUီးမယ် မမနု”“ေAးေAး ကောင်းပြီ သား”တံခါးနားကိုAေ၇ာက်မှာ…“ယင်ကောင်….သား”ယင်ကောင်ပြန်လှည်.ကြည်.လိုကတယ်….။်မနုကမခို.တရို.လေးပြုံးပြီး….“Aတိုးကတစ်လတစ်ခါရှင်း၇မှာနော်….သိလား”ဟင်….ဘယ်လိုကြီးပါလိမ်.။ပြီးပြီးေ၇ာဆိုပြီးယင်ကောင်ပြန်ပြောလိုက်တယ်….။“ဟုတ်ကဲ. ဟုတ်ကဲ. မမနု”Aဲဒီနေ.ကမှတ်မှတ်၇၇ယင်ကောင် ဘိလယက်ထိုးတာ ၅သောင်းထပ်ရှုံးပါတယ်။ိAခန်း ( ၂ ) Aတိုးပေးခြင်းဘာလိုလိုနဲ.တစ်လဆိုတဲ.Aချိန်ပြည်.သွားပါလေေ၇ာ….။ဒီကြားထဲမှာယင်ကောင်တစ်ယောက်လည်း လောင်းကစားသံသ၇ာထဲမာ နိုငလိုက် ရှုံးလိုက်ပေါ.ဗျာ…။ှ်ဒီလိုနဲ.ပဲ မနှုဆီကချေးထားတဲ.ပိုက်ဆံပြန်ဆပ်၇မယ်.၇က်ေ၇ာက်လာပါေ၇ာ….။Aမှန်တော. Aဲဒီနေ.ကယင်ကောင်.လက်ထဲမှာ 5.
မနုကိုပြန်ဆပ်ဖို.ဆိုပြီးပိုက်ဆံတစ်သိန်းသပ်သပ်ဖယ်ထားပြီးသားရှိတယ်ဗျ…။ဒါပေမယ်. Aဲဒီမနက်မှာပဲငမျိုးဆိုတဲ. သူငယ်ချင်း ဘိန်းစားတစ်ကောင် ပေါက်ချလာပါေ၇ာလားဗျာ။Aဲဒီကောင်ကသူညကဘောပွဲရှုံးတာ ဒီမနက်ဒိုင်ကို ပိုက်ဆံAကျေပေး၇မှာဖြစ်ကြောင်း၊သူ.Aိမ်ကလွှဲပေးလိုကတဲ. ပိုက်ဆက ဘဏ်ဖွင်.ချိနကျမှ၇မှာဖြစ်ကြောင်း၊်ံ်AဲဒီAတွက်သူ.ကိုပိုက်ဆံတစ်သိန်း ခန်. ခနချေးပါ၇န်ဆိုတဲ.Aကြောင်း၊ ၁၂ နာ၇ီလောက်မှာဆက်ဆက်ပြန်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ.Aကြောင်းဖွဲ.နွဲ.ပြီးတော.ပိုက်ဆံလာချေးတော. သဘောကောင်းတဲ.ယင်ကောင်တစ်ယောက်လည်းချေးမိလိုက်တာပေါ.ဗျာ….။ဒီကောင်ထက်မသွားခင်တောင်သေသေချာချာမှာလိုက်သေးတယ်…ငါညနေသူများကိုပေးစ၇ာရှိတဲ.ပိုက်ဆကွိုံပေးလိုက်တယလို. ။ဆက်ဆက်ပြန်ပေးပါလို.။ ဒီကောင်ကလည်း ပေးပါ.မယ်စိတ်ချပါပေါ.။ပြီးလည်းပြီးေ၇ာ…ယင်ကောင်ဘလိယက်ခုံမှာ သွားပြီးဈာန်ဝင်နေလိုက်တာ…၁၂နာ၇ီထိုးသွားတာတောင်ိမသိလိုကဘူး။်“ယင်ကောင်….ယင်ကောင်….ချွတ်…ချွတ်…ရွှတ်”မချိုက ယင်ကောင်.ကိုတချွတ်ချွတ်နဲ. လှမ်းခေါ်တယ်…။ယင်ကောင် မချိုနားကိုသွားပြီး….“ဘာလဲ…မချို”“မနုကသူ.ပိုက်ဆံပြန်ဆပ်ပါUီးတဲ. A၇င်းမပေးနိုင်သေးလည်း Aတိုးတော.လာသတ်ပါတဲ.”“သြော်…Aင်း..Aင်း…ခနနေသွားလိုက်မယ်လေ…”မချိုပိုက်ဆံAကြောင်းပြောတော.မှပပိုက်ဆံချေးသွားတဲ.ဟိုAကောင်ဘိန်းစားငမျိုးကိုသတိ၇တော.တယ်…။ဲနာရီကိုကြည်.လိုကတော. ၁၂နာရီတောင် Aတော်ကြီးကျော်နေပြီ။ဒီကောင်က်ဘိနးစားဆိုပေမယ်.ကတိတော.တည်ပါတယ်…။်ဘာများဖြစ်နေလို.လဲ.မသိ…ဘဏ်မှာများလူကျပ်နေလို.လား…….။သို.လော…သို.လောနဲ.ယင်ကောင်လျှောက်တွေးနေမိတယ်…။၁နာရီ။၇င်ထမှာတော.စိုးရိမ်စပြုလာပြီ…။ ထိုးနေတဲ. ဘိလိယက် တစ်ပွဲAပြီးမှဲာယင်ကောင်ဘေးထွက်ပြီးခုံပေါ်မှာထိုင်၇မလို ထ၇မလိုဖြစ်နေပြီ….။“ယင်ကောင်…ငါ.ကိုတော.မျက်နှာပျက်ေAာင်မလုပ်ပါနဲ.နော်…”မချိုက မျက်နှာဆီးရွက်လောက်နဲ. ယင်ကောင်.ကိုတိုးတိုးလေးလှမ်းပြောတယ်…။“ဟာဗျာ…မချိုကလည်းပိုက်ဆံကAဆင်သင်.လုပ်ထားပြီးသား…ဟိုကောင်ငမျိုးဗျာ…”မချိုကသူ.ကိုနားမလည်သလို ကြည်.တယ်။ Aခု Aချိန်မှသူ.ကို့ရှင်းပြနေလည်းသူလိပပတ်လည်မှာမဟုတ်ဘူး…ဒီတော.ယင်ကောင်လည်းဘာမှဆက်မပြောတော.ဘူး။်“မချို…..ေ၇” တစ်ဘက်ခြံကမနုရဲ.ခေါ်သံကိုကြားလိုက်၇တယ်….။မချိုကသူ.မျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည်.ပြီး….“ရှင်….မမနု”“မောင်ယင်ကောင်ရှိ၇င်တစ်ချက်လောက်လွှတ်လုက်ကွယ်….”ိ“ဟုတ်ကဲ. မမနု” တဆက်တည်းပဲ 6.
မချိုက“ကဲ…ယင်ကောင်ေ၇နောက်ဟာနောက်မှရှင်းပေတော.။Aခုတော.ခနသွားတွေ.လိုက်Uီး။နဲနဲပါးပါးတောင်းပန် လိုက်ပေါ.ဟာ…ဘယ်နေ.မှာဆက်ဆက်ပေးပါမယ်ပေါ.။” ဟုတ်ကဲ. မချို။ပြောပြီး ယင်ကောင်မနုတို.ခြံဘက်ကို ထွက်လာခဲ.တယ်။ စိတ်ထဲမှာတော.ဟိုကောင်ဘန်းစားငမျိုးကိုကောင်းကောင်း ကျိန်ဆနေတာပေါ.။ဒီကောင်.ကြောင်.ိဲသောက်ရှကကွတော.မယ်ဆိုပြီး…်ဲမနုတို.ခြံရှေ.ေ၇ာက်တော.“မမနုေ၇…မမနု…”ဆိုပြီးယင်ကောင်ေAာ်ခေါ်လိုက်တယ်….။“၀င်ခဲ.ယင်ကောင်ေ၇…ခြံတံခါးကစေ.ရုံတင်စေ.ထားတာ”ဆိုတဲ.မနု၇ဲ.Aသံကိုပြန်ကြား၇တယ်။ယင်ကောင်ခြံတံခါးကို Aသာတွန်းဖွင်.သွားပြီးAိမ်ထဲကို ၀င်သွားလိုကတယ်…။်Aိ်မ်ထဲေ၇ာက်တော.Aိမ်ရှေ.ခန်းမှာ ဗွီဒီယိုထိုင်ကြည်.နေတဲ. မနုကိုAခန်.သားတွေ.၇တယ်။Aိုကလို.ထင်ပါ၇ဲ.…စပန်.သားဂါဝန်Aပါးစားလေးကိုဝတ်ထားတယ်….။်ထိုင်ခုံပေါ်မှာဂါဝန်ကိုဒူးခေါင်းAပေါ်လောက်Aထိ ဆွမပြီးပေါင်ကိုချိတ်ပြီးထိုင်နေတော.၀င်းပြီးဝါနေတဲ.ဲပေါင်တံAတွင်းသားတွေက ထင်းခနဲပေါ.။ ယင်ကောင် ခနလောက်Aသက်ရှု၇ပ်ချင်သလို ဖြစ်သားတယ်…။ွနောက်တော.မှသတိဝင်ပြီး……“မမနု….”“သြော်….ယင်ကောင်ထိုင်လေ….မမနုလည်းပျင်းပျင်းရှိတာနဲ. ဗီဒီယိုထိုငြ် ကည်.နေတာ…”ွပြော၇င်းနဲ. မနုကထိုင်ခုံပေါ်ကနေ ကုန်းAထမှာ ဟိုကသွားတဲ. Aင်္ကျီလည်ပင်းပေါက်ကနေ်Aပြင်ဘက်ကိုပြူထွက်လာတဲ. ၇င်သားAစုံက ယင်ကောင်. မျက်စိထဲမှာ လျှပ်စီးလက်သလိုဝင်းကနဲလက်ကနဲပေါ.။ စိတ်ထဲမှလည်း ဒီမိန်းမကြီး ငါ.ကိုများမြူဆွယ်နေတာလားလို.သို.လောသို.လောတွေးလိုက်မိတယ်။ မနုကကြောင်စီစီဖြစ်နေတဲ. ယင်ကောင်.ဘေးကခုံမှာဝင်ထိုင်၇င်း“မိုက်ကယ်ဒေါက်ကလပ် နဲ.ရှာရွနစတုန်း ကားလေ…basic instanct တဲ. ။်ယင်ကောင်ကြည်.ပြီးပြီလားမကြည်.၇သေး၇င်ယူကြည်.ပါလား…”တကယ်တော. Aဲဒီကားကိုယင်ကောင်ကြည်.ပြီးပါပြီ…။ ရှာရွန်စတုန်းရဲ. Sex sence တွေကိုAသားပေးရိုက်ထားလို.Nc 17 Aဆင်.တောင် သတ်မှတ်ထားတဲ. Aိမ်ထောင်ေ၇းကားတစ်ကားပါ…။Aဲဇာတ်လမ်းလေးကတော.တော်တော်လေးကောင်း တယ်ပေါ.ဗျာ။“ကြည်.ပြီးပြီ မမနု၇ဲ.Aဲဒီကားထဲမှာ မင်းသမီးက တော်တော်လေးကောင်းတာဗျ….”ယင်ကောင်လည်းသွေးတိုးစမ်းသလို တစ်ချက်လောက်ဖော လိုက်တယ်….။“ဟုတ်တယ်…ဟုတ်တယ်”မနုက Aားတက်သေ၇ာ ထောက်ခံတယ်။ပြီးတော.မှ တစ်ခုခုကိုသတိ၇သလိုလို ဖြစ်သွားပြီး ရှက်တက်တက်လေသံနဲ.“Aိမ်မှာက သမီးမိန်းကလေးမွေးထားတာဆိုတော. Aဲဒီလုကားမျိုးတွေ ကြည်.ချင်တိုင်ိးကြည်.လို.မ၇ဘူးလေ… သမီးမရှိတဲ.Aချိန်မှကြည်.၇တာ” တစ်ယောက်တည်းညည်းသလိုနဲ.ယင်ကောင်.ကိုပြောတယ်….ယင်ကောင်လည်းသူရှက်သွားမှာစိုးလို. မသိလိုက်မသိဘာသာနဲ.“ညီမလေးကဘယ်သွားလို.လည်း မမနု…”“Aမလေး … မင်းညီမကတော.မိုးလင်းမိုးချုပ် သူ.သင်တန်းတွေနဲ. Aားတယ်လို.မရှိပါဘူး…ညဆို 7.
၈နာရီလောက်မှAိမ်ပြန်ေ၇ာက်တာ…မမနုဆို Aိမ်Aလုပ်တွေပြီးတာနဲ.တစ်ယောက်တည်းတစ်နေ.လုံးပျင်းနေေ၇ာပဲ…Aခုယင်ကောင်လာတာAတော်ပဲ…ယင်ကောင်Aချိန်၇တယ်မဟုတ်လား…ယင်ကောင်နဲ.စကားေAးေAးဆေးပြော၇တာပေါ.”“၇ပါတယ်…မမနု”၇ပါတယ်လို.သာပြော၇တယ်…စိတထကတော. ဒီမိနးမကြီးဘယ်လိုလဲလို. တွေးနေမိတယ်…်ဲ်ထင်တဲ.Aတိုင်းသာမှန်နေ၇င်တော. ယင်ကောင်တို. ကံဇာတာတက်ချင်တာလား၊ ကံဇာတာကျချင်တာလားမသိ…..။“မမနု…ပိုကဆံကလေ…ဟို…ဟို…”်ယင်ကောင် မျက်နှာလေးကိုကလေးမသာလေးလို AိုAိုလေးထားပြီးပြောတယ်။ယင်ကောင်.စကားမဆုံးခင်မှာပဲမနုက….“Aမလေး…ပိုကဆံကAေ၇းမကြီးပါဘူးကွယ်…တကတည်းမှပဲ…ဒါပဲနော်…Aတိုးတော.ပေး၇မယ်”်မျက်လုံးလေးကိုထောင်.ကပ်ပြီး မနုကပြောတယ်…ယင်ကောင်ကတော. ၇င်ထမှာကတုံက၇င်နဲ.ပေါ.။ဲ“ခနနော်…ယင်ကောင် မမနုA၇မ်းပူလု.ေ၇သွားချိုးလိုက်Uီးမယ်…ယင်ကောင်ိAခွေကြည်.ချင်၇င်ဟိုမှာAခွေတွေရှိတယ်…ဖွင.ကြည်.လေ…”်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ. မနုကAိမ်ခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်…။ယင်ကောင်တစ်ကောင်ခမျာမှာတော. တစ်ကောင်တည်း Aတွေးတွေ ချာချာလည်၇င်းနဲ.ကျန်၇စ်ခဲ.တာပေါ.ခေတ်ဆန်ဆန်နေတတ်တဲ.မိန်းမတွေပီပီ ၇ဲတင်းပွင်.လင်းတာလား…။ဒါမှမဟုတ်ဒီမိန်းမကြီးငါ.ကိုကျူံးသွင်းတာလားပေါ.။စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ.မကောင်းတဲ.Aတွေးတွေ ပျောက်လိုပျောက်ငြား ယင်ကောင်တီဗွီရှေ.ကိုလာခဲ.တယ်။ပြီးတော.Aဆင်သင်. တွေ.၇တဲ. Aခွေတစ်ခွေ ကိုကောက်ကိုင်ကြည်.လိုက်တယ်။Aခွေမှာကဘာမှေ၇းမထားဘူး။ယင်ကောင်လည်း ဘာ၇ယ်မဟုတ်ဘူး AခွေကိုေAာက်စက်ထဲံထိုးထည်.လိုက်တယ်။ (မှတ်ချက်- Aဲဒီကာလတုံးကvcd player များမပေါ်သေးပါဘူးခင်ဗျာ)Aားပါးပါး…တီဗွီမှာပေါ်လာတာကAမေ၇ိကန်ေAာကားကြမ်းကြမ်း ။ တိတိကျကျပြော၇၇င်AဲဒတုနးကA၇မ်းကိုခေတ်စားတဲ. Taboo ဆိုတဲ. Aမေ၇ိကန်ေAာကား…။ီ်ယင်ကောင် ၇င်ထကမီးစကငြိမ်းမသွားတဲ.Aပြင်ပိုဆိုးလာတယ်…။ဲယင်ကောင်ေAာက်စက်ကိုပြန်ပိတ်ပြီး ထိုင်ခုံမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေးသွားထိုင်နေလိုက်တယ်…။ယင်ကောင်.စိတ်ထမာလွန်ဆွဲနေတယ်။ ထိုင်နေ၇င် ကောင်းမလား ၊ ပြန်သွားပြီး ပြီးမှဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာ၇င်ကောင်းမလားလို.ပေါ.။ဟုတ်တယ်လေ…တော်တော်ကြာမဖြစ်သင်.တာတွေဖြစ်ကုန်၇င်ဘယ်လိုလုပမလဲ။်ကိုယ်ကလည်းပုထုဇU်ပမဟုတ်လား…။ဲ“၀ူး……….”ယင်ကောင်သက်ပြင်းမောကြီးကိုချလိုက်တယ်။ ပြီးတော.ရှေ.ကစားပွဲပေါ်မှာAဆင်သင်.တွေ.၇တဲ.ေ၇ပုလင်းAဖုံးကိုဖင်.ပြီးေ၇တစ်ကျိုကကွို 8.
မော.သောက်ချလိုက်တယ်…။“ယင်ကောင်….ယင်ကောင်….”Aတွင်းခန်းထဲက မနု၇ဲ.ခေါ်သံကြောင်. ယင်ကောင်ေ၇သောက်နေတာတောင်သီးသွားတယ်…။“Aဟွတ်…Aဟွတ်….ဟုတ်ကဲ.မမနု”“မမနု ကိုဒီမီးချောင်းလာကြည်.ပေးစမ်းကွယ်…ဘာဖြစ်လည်းမသိဘူး”“ဟုတ်ကဲ. မမနု….၀င်ခဲ.မယ်နော်”“သြော်…၀င်ခဲ.ပါဆိုမှပဲ…ဒီကလေးကလည်း…Aသံလူကြားလိုက်တာ”ကဲ…နောက်ဖြစ်တဲ.ပြသနာနောက်မှပဲရှင်းတော.မယ်ဗျာ Aဟီး….ယင်ကောင်Aတွင်းခန်းထဲကိုဝင်သွားလိုက်တယ်။Aိပ်ခန်းထဲကမှန်တင်ခုံရှေ.မှာ ထမီ၇င်လျား နဲ.ေ၇ချိုးပြီးစမမနုကိုတွေ.၇တယ်။မမနုကယင်ကောင်ကိုလှည်.ကြည်.ပြီး …“မီးချောင်းဘာဖြစ်လည်းမသိဘူးယင်ကောင်၇ဲ. ကြည်.ပေးစမ်းပါUီး”ယင်ကောင်လည်းယောင်တောင်တောင်နဲ. မီးချောင်းခလုတ်ကိုဖွင်.လိုက်ပိတလိုက်လုပ်ကြည်.တယ်။မီးချောင်းက ပွင်.မလာဘူး။်“မီးချောင်းများချောင်နေလားမသိဘူးမမနုရဲ. ”“ဟုတ်လား…Aဲဒါဆိုဒီထိုင်ခုံနဲ.တက်လှည်.ကြည်.လေ”မမနု ကပြောပြောဆိုဆိုဘေးနားမှာ Aသင်.ရှိနေတဲ. ခုံတစ်လုံးကိုယူပေးတယ်။ယင်ကောင် ခုတင်ပေါ်ကိုခုံကိုတင်လိုက်ပြီး Aဲဒီခုံပေါ်က တဆင်. မီးချောင်းကိုတက်လှည်.ကြည်.တယ်။မီးချောင်းကလင်းမလာဘူး။ ယင်ကောင်ေAာက်မှာထိုင်ပြီး သနပ်ခါးလိမ်းနေတဲ. မမနုကိုမီးချောင်းကျွမ်းနေတာဖြစ်မယ်လို. ပြောမလို.ငုံ.Aကြည်. မမနုက ၇င်ဘတ်မှာစည်းထားတဲ. ထမီလေးကိုလျှော.ပြီး သနပ်ခါးAလိမ်းနဲ.Aတိုး ….မမနုရဲ. ၀င်းဝါ နေတဲ. ၇င်နစ်မွှာကို တစ်ဝက်လောက်မြင်ှလိုက်၇တယ်…။ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ….ယင်ကောင်.လန်ကျောက်ဆိုတာလဲ ဖြောင်းကနဲပေါ.။မာပြီးတင်းနေတာကိုများပြောပါတယ်…။ AဲဒီAချိန်မှာပဲမော.ကြည်.လာတဲ. မမနု၇ဲ. မျက်ဝန်းAစုံနဲ.၇င်ဆိုင်မိတယ်…။ မမနုကယင်ကောင်.မျက်နှာကို တလှည်. ယင်ကောင်.လန်ကျောက်ကိုတလှည်.Aံ.သြတဲ.မျက်နာနဲ.ကြည်.နေတယ်…။ယင်ကောင် မမနုမျက်နှာကို မကြည်.၇ဲတော.လို.ှAပေါ်ကမီးချေုာင်းကိုမော.ကြည်.ပြီး ဟိုလှည်.ဒီလှည်. လုပ်နေလိုက်တယ် ။လန်ကျောက်လား…မကျသေးဘူး…မာတောင်ပြီးရှေ.ကိုတန်းမတ်နေတာများ ငေါငေါကြီးကိုဖြစ်လို.ပေါ.။Aချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားသလဲ…ယင်ကောင်မသိလိုက်ဘူး။ယင်ကောင်သတိပြန်ဝင်တဲ.Aချိန်မှာ ခုတင်ပေါ်ကိုတစ်ယောက်ယောက်တက်လာတဲ. Aသံကိုကြားတယ်။ပြီးတော.ယင်ကောင်. လန်ကျောက်ကို ပုဆိုးပေါ်ကနေ ဆုပ်ပြီးကိုငနေတဲ.်လက်တစ်စုံ၇ဲ.AထိAတွေ.။တစ်ကယ်ကိုနုးနုးညံ.ညံ.လေး…ယင်ကောင်ကြက်သီးတွေထသွားတယ်…။ယင်ကောင်ေAာက်ကိုငုံ.မကြည်.ရဲဘူး…ဟုတ်တယ်လေ…ဒီAခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲရှိတာ ဒါမမနုပဲပေါ.။ဆတ်ကနဲ…ပုဆိုးကိုဆွဲချွတ်ချသွားတာကိုသိလိုက်တယ်…။ပြီးလည်းပြီးေ၇ာ… 9.
ဆတ်ကနဲ…ပုဆိုးကိုဆွဲချွတ်ချသွားတာကိုသိလုက်တယ်…။ပြီးလည်းပြီးေ၇ာ…ိနုးညံ.တဲ.လက်တစ်ဖက်ကယင်.ကောင်လန်ကျောက်က Aေ၇ခွံတွေကို ဖြေးဖြေးလေးဆွဲဖြဲချသွားတယ်။ပြီးတော.နောက်တစ်ဖက်က ယင်ကောင်.ဒစ်ကိုရွ၇ွလေး ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးနေတယ်…။ကောင်းလိုက်တာဗျာ…လန်ကျောက်လား…တင်းခနဲတင်းခနဲ နဲ.ပေါ.ဗျာ။ယင်ကောင် Aရဲစွန်.ပြီးေAာက်ကိုငုံကြည်.လိုက်တယ်…။ယင်ကောင်.ကိုပြုံးပြီးကြည်.နေတဲ. မမနုရဲ. မျက်လုံးတွေကိုတွေ.၇တယ်…။ေAးလေ…ယောင်္ကျားဆုံးထားတာ၂နှစ်၃နှစ်လောက် ရှိပြီဆိုတော. သူလည်းငတ်ပြတ်နေလောက်ပြီပေါ.။“ကောင်းလား…ယင်ကောင်”မမနုကယင်ကောင်ကိုပြုံးပြုံးလေး မေးတယ်…။ယင်ကောင် ပါးစပ်ကမဖြေနိုင်ဘူး။ခေါင်းကိုပဲညိတ်ပြလိုက်တယ်…။“ယင်ကောင်.ကိုဒီထက်ကောင်းေAာင်လုပ်ပေးမယ်…”ပြော၇င်းနဲ. မမနုက၀တ်ထားတဲ.ထမီကိုချွတ်ချလိုက်တယ်။ မမနု၇ဲ.ကျွကောသီးAလတ်စားလောက်ရှိတဲ.နို.နှစ်လုံးက ခုန်ပေါက်ပြီးAပြင်ကိုထက်လာတယ်။ွဲAေ၇ာင်က၀င်းဝါပြီးတော.နို.သီးခေါင်းလေးကညိုတိုတိုနဲ.ပေါ.။ မြင်သာေAာင် ပြော၇၇င်ယိုးဒယားမတွေရဲ.ခပ်ကြီးကြီးနို.တွေလိုပေါ.။ မမနုကယင်ကောင်.လန်ကျောက်ကိုသူ.ရဲ.နို.နှစ်လုံးနဲ.ဆွဲညှပ်လိုကတယ်…။ ပြီးတော.နို.နှစ်လုံးကို Aထက်ေAာက်ညင်ညင်သာသာလေးရွေ.လျားပေးတယ်…။ ကောင်းလိုက်တာဗျာ…။ဒီလိုနို.နဲ.ဂွငးတိုက်ပေးတာကိုဗွီဒီယိုတွေထမာပဲ ကြည်.ဖူးခဲ.တာ… Aခုမှတော်တော်ကောင်းမှန်းသိတော.တယ်။ှဲမမနုက နို.တစ်ဖက်စီကိုဘယ်တဖက်ကို မလိုက် ညာတဖက်ကို မလိုက်နဲ.၂မိနစ်လောက်ဆက်လုပပေးတယ်…။ယင်ကောင်မနေနိုင်တော.ဘူး …ေAာ်၇ပြီ။်“Aား…Aာ…ရှီး…မမနု၇ယ်…ကောင်းလိုက်တာဗျာ”ယင်ကောင်.Aသံကိုကြားတော.မမနုက ယင်ကောင်ကိုပြုံးကြည်.ပြီး တိုက်စစ်ကိုတစ်မျိုးပြောင်းတယ်…။ယင်ကောင်. လန်ကျောက်ကုလျှာလေးတစ်လစ်တစ်လစ်ထုတ်ပြီး A၇င်းကနေAဖျားAထိလျှောက်ယက်တော.တာပါပဲ။ ယင်ကောင်တစ်ယောက်ဖင်ကြောတွေ၇ှုံ.၀င်သွားမတတ်ကောင်းနေတယ်…။ဟုတ်တယ်…မှုတ်ပေးတယ်ဆိုတာဖာသည်တွေတောင်မှAတော်ကိုစိတ်လိုလက်၇ရှိမှလုပ်ပေးတာမဟုတ်လား…Aခုလိုဆိုတော. တစ်ခါမှAမှုတ်မခံဘူးတဲ. ယင်ကောင်တစ်ယောက်AလူးAလဲပေါ.။ မမနုက လျှောက်ယက်နေ၇ာကနေယင်ကောင်.လန်ကျောက်တစ်ခုလုံးကို ပါးစပ်ထဲငုံပြီးတော.သွင်းယူလိုက်တယ်။ပြီးတော.ပါးစပ်ထဲမှာတင် လျှာလေးနဲ.ဟို၇မ်းလိုက်ဒီ၇မ်းလိုက်လုပ်နေတယ်..။ခနနေတော.နှုတ်ခမ်းလေးကို ခပ်တင်းတင်းလေးစုပြီး ယင်ကောင်.လန်ကျောက်ကိုAပြင်ကုဖြေးဖြေးချင်းဆွထတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော. လန်ကျောက်ရဲ.ေAာက်ဖက်ပါးသိုင်းကြိုးေAာက်နာိးဲုလေးကိုလျှာလေးနဲ. ၁၀ချက်လောက်ယက်လိုက်တယ်..။ ယင်ကောင်ခါးကော.သွားတယ်။ ပါးစပ်ကလည်းဟန်မဆောင်နိုင်တော.ဘူး။“မမနူ…မမနု…Aဲလိုလေးလုပ်ပေးစမ်းပါဗျာ…ကောင်းလိုက်တာ…ကောင်းလိုက်တာ” 10.
ဆိုပြီးေAာ်နေ၇တယ်။ မမနုက နောက်ထပ်၁၀ချက်လောက်ယက်ပေးAပြီးမှာတော. ယင်ကောင်.ဒစ်ကိုငုံမိတယ်ဆုရုံလေးငုံပြီးတော.လျှာနဲ.ဒစ်ေAာက်ခြေကနေပြီး သကြားလုံးများစုပ်သလို“ပြွတ်…ပြွတ်…ပြွတ…ပြွတ…”နဲ.စုပ်ပေးတယ်။်ယင်ကောင်ဘယ်လိုမှထိန်းမ၇တော.ဘူး။ မမနုခေါင်းကို ကိုင်ပြီး လန်ကျောက်ကို ရှေ.တိုးနောက်ငင်ကစားမိတယ်…။ မမနုက Aထဲကနေပြီးတော.လျှာလေးကိုထောက်ထားပေးတယ်…။ကောင်းချက်ကတော.စီးပိုင်နေတာပဲဗျာ…။ Aချက် ၂၀ လောက်Aေ၇ာက်မှာတော. ယင်ကောင်ဘယ်လိုမှထိန်းမထားနိုင်တော.ဘူးစိတ်ကို လွှတ်ပေးလိုက်တော.တယ် ။ မမနုကလည်း ဒါကိုသလို.ထင်ပါရဲ.။ိယင်ကောင်.လန်ကျောက်ကို ပါးစပ်ထက ထုတ်ပြီး လက်နှစ်ဖက်နဲ.စုံကိုင်လို.ခပ်သက်သက်လေွးွဲဂွငးတိုက်ပေးတယ်…။်“A….A…Aား…မမနု…..၇ယ်”ယင်ကောင်ဒါပဲေ၇၇ွတ်နိုင်ပါတော.တယ်။ပြီးတော.လန်ကျောက်ထကA၇ည်တွေကုပန်းထုတ်လိုက်တယ်…။မမနုကတော.ယင်ကောင်.လန်ကျောက်ကိဲုိရွရလေးကိုင်ပြီး ဂွင်းဆက်တိုက်ပေးနေလေရဲ.။ွ“ကဲ…ကိုယ်တော်လေးဇိမခမနေနဲ. ပြီး၇င်လည်းေAာက်ကိုဆင်းUီး ခုံကြီးပေါ်မှာမတ်တတ်ကြီး…တစ်ခါတည်း”်ံမမနုရဲ. Aသံကြောင်.ယင်ကောင် ခုံပေါ်ကနေဆင်းလိုကတယ်…။ပြီးတော. ခုတင်ပေါ်ကခုံကိုေAာက်ကိုချလိုက်တယ်။ Aခုချိနထိ မမနုမျက်နှာကို တော.မကြည်.ရဲသေးဘူး။်“ကဲ…ကိုယ်တော်ဒီကနေခနစောင်.နေ…” ပြောပြီးတော. မမနုက Aိပ်ခန်းနဲ.တွထားတဲ.ေ၇ချိုးခန်ဲးသေးသေးလေးထဲ ၀င်သားတယ်။ ယင်ကောင်ခုတင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးကိုယ်.Aသားကိုကိုယ်ပြန်ပြီွးလက်နဲ.ဆိတြ် ကည်.တယ်။ ငါAိပ်မက်များမက်နေတာလားပေါ. ။ ခနလောက်နေတော.ေ၇ချိုးခန်းထဲကနေမမနုပြန်ထက်လာတယ်…။ ယင်ကောင်.ဘေးမှာဝင်ထိုင်ပြီး ယင်ကောင်.ကို ခပ်ပြုံးပြုံးလေးကြည်.တယ်။ွ“ယင်ကောင်…”“ဗျာ…မမနု”“မမနုလုပပေးတာကောင်းလား”်“Aင်း….Aင်း…ကောင်းတယ်မမနု““မမနု ကို Aတိုးပေး၇Uီးမယ်နော်…”“ဗျာ….”“ယင်ကောင်.ကိုပြောထားတယ်လေ…မမနုကိုAတိုးပေး၇မယ်လို.”“ဟုတ်…ဟုတ်ကဲ. မမနု”သြော်…လက်စသတ်တော.သူကဒီAတိုးကိုလိုချင်နေတာကိုး….။ဒီလိုဆိုတော.လည်း ယင်ကောင်တို.ကပေး၇သေးတာပေါ.ဗျာ။ မမနုကထိုင်နေ၇ာကနေမတ်တတ်ထ၇ပ်လိုက်တယ်…။ပြီးတော.၇င်လျားထားတဲ.ထမီကိုဖြေချလိုက်တယ်…။Aလင်းေ၇ာင် ခပ်မှိန်မှိန်၇ဲ.ေAာက်မှာတောင် မမနု၇ဲ.AသားAေ၇က၀င်းဝါပြီး ရွှေေ၇ာင်တောက်နေတယ်…။ယင်ကောင် မမနုကိုမျက်တောင် မခပ်စတမ်းငေးနေမိတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ…ယင်ကောင်တို.တွေ.ဘူးခဲ.တဲ.မိန်းမတွေဆိုတာက တစ်ယောက်မဟုတ် 11.
တစ်ယောက်တော. Aပြစ်တွေ.၇တာချည်းပဲ။ မမနုကတော.Aဲဒလိုမဟုတဘူး…။ပြစ်မျိုးမှဲ.မထင်ီ်ဆိုတဲ.စကားဟာမမနုကို၇ည်၇ွယ်ပြီးထားခဲ.တဲ.စကားဖြစ်မယ်ထင်တယ်…။ Aသက် ၃၈နှစ်၇ှိပြီးကလေးတစ်ယောက်မွေးထားပြီးသားဆိုတာပြောလို.သာယုံ၇တယ်…Aမို.Aမောက်Aကွေ.Aကောက်တွေက တော်တော်လှပါတယ်ဆိုတဲ.Aပျိုတွေတောင်Aရှုံးပေး၇လိမ်.မယ်…။“ကြည်.လှချည်လား….”မမနု ကခုတင်ပေါ်ကိုဘေးစောင်းလေးလှဲချလိုက်၇င်း ပြုံးစစနဲ.ယင်ကောင်ကို လှမ်းပြောတယ်။“မမနုက A၇မ်းလှလို.ပါ”“မင်းတို. ယောင်္ကျားတွေကဒီလိုပါပဲ” မျက်နှာလေးကိုမဲ.ပြီး မမနုကပြောတယ်။ပြီးတော.လက်နှစ်ဖက်ကိုယင်ကောင်. ဖက်ဆန်.တန်းပြီး…“လာလေ…ဘာလုပ်နေတာလဲ”ယင်ကောင် မတ်တတ်၇ပ်ပြီးကိုယ်ပေါ်မှာကျန်နေတဲ.တီရှပကိုဆွချွတ်ပစ်လိုက်တယ်…။်ဲပြီးတော.မမနုဘေးမှာဝင်လှဲချလိုက်ပြီး မမနုကိုသိုင်းဖက်လိုက်တယ်…။“ယင်ကောင်….”“ဗျာ…မမနု”“ယင်ကောင်နဲံ. မမနုစကားနဲနဲပြောကြ၇ေAာင်…”“သြော်…Aင်း…ပြောလေမမနု”“ယင်ကောင် မမနုကို Aထင်သေးသွားလား…”“ဟင်.Aင်း…Aထင်မသေးပါဘူး…မမနု၇ယ်လူတွေAားလုံးဟာသွေးသားAလိုကိုဘယ်သူမှလွန်ဆန်နိုင်ကြတာမှမဟုတတာ…မမနုလည်းလူထဲကလူတစ်ယောက်ပဲမဟုတ်လားဗျာ…်ဘာလို.Aထင်သေး၇မှာလည်း…”ယင်ကောင်ဒိုငကြောင်တွေလွှတ်လိုကတယ်…။တော်တော်ကြာ…ဒီမိန်းမစိတ်ပြောင်းသွားလို.်ကုနးေAာ်မြှ ဖင်.ငါးပါးတင်မကဘူး Aကုန်လုံးမှောက်ကုန်မှာ…။ စကားAဆုံးမှာယင်ကောင်မမနုရဲ.်နှုတ်ခမ်းတွဲတွဲလေးကိုငုံပြီးစုပ်ယူလိုက်တယ်…။ လက်တစ်ဖက်ကတော.မမနုကိုသိုင်းဖက်ထားပြီးကျန်နေတဲ.လက်တစ်ဖက်ကို မမနု၇ဲ.နို.တွေကိုဆုပ်နယ်ဖို.Aလုပ်ပေးလိုက်တယ်…။မမနုကိုနမ်းနေတဲ.ယင်ကောင်.နှုတ်ခမ်းတွေကိုမမနုကသူ.လျှာလေးနဲ.ပြန်ပြန်ပြီးတော.ယက်ပေးတယ်…။မမနု၇ဲ.လက်တစ်ဖက်ကလည်းယင်ကောင်.ကျောပြင်ကို ရွရွလေးပြန်ပြီးတော.ပွတ်သပ်ပေးနေတယ်…။၂မိနစ်လောက်Aကြာမှာတော.မမနုရဲ.နှုတ်ခမ်းတွေဟာ ယင်ကောင်စုပ်ချက်တွေကြောင်.တော်တော်လေးနီရဲလာပါတယ်…။ ယင်ကောင် ဘေးတစောင်းလှဲနေ၇ာကနေမမနုရဲ.ကိုယ်ပေါ်ကိုAလျားလိုက်မှောက်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော. တံတောင်ဆစ်တဖက်ဆီကိုမမနုရဲ. ဘေးတစ်ဖက်ဆီမှာထောက်ပြီး လက်နစ်ဖက်က မမနုရဲ. ခပ်ထွားထွားနို.နှစ်လုံးကိုေAာက်ကနေ ဖြေးဖြေးလေးပင်.တင်ပြီှးဆုပနယ်ပေးလိုက်တယ်။ မမနု၇ဲ.နို.တွေကိုကိုင်၇တာတော်တော်ကို A၇သာရှိပါတယ်…။်လေးငါးခြောက်ချက်လောက်နယ်ပေးလို.Aပြီးမှာတော. လက်နှစ်ဖက်နဲ. နို.နှစ်လုံးစလုံးကိုပင်.တင်ပြီးမာတင်းပြီး တောင်နေတဲ. နို.သီးခေါင်းညိုတိုတိုလေးကို လျှာနဲ.ဝေ.ပြီးယက်ပေးလိုက်တယ်။“Aင်း….ဟင်း….ဟင်း….”“ကောင်းတယ်ကွယ်….” 12.
မမနုဆီက Aသံထွက်လာတယ်။ ပြီးတော.ယင်ကောင်.ခေါင်းကိုေAာက်ကိုမသိမသာလေးတွန်းချတယ်။ယင်ကောင်ပေပြီးတော.မမနုရဲ.နို.သီးခေါင်းလေးကို ပါးစပ်တစ်ပြည်. ငုံပြီးတော.စုပ်ယူလိုက်တယ်။“Aင်း….ရှီး….ကျွတ်..ကျွတ်…ကျွတ်…”မမနုနုတ်ကAသံတွေထက်လာတယ်။ ယင်ကောင်.ခေါင်းကိုခပ်ဖိဖိလေးလက်နှစ်ဖက်နဲ.စုံကိုင်ပြီးတော.ွေAာက်ကိုသိသိသာသာကြီးတွန်းချတယ်…။သူဘာကိုလိုချင်နေလဲဆိုတာယင်ကောင်လည်းသိတာပေါ.ဗျာ…ဒါပေမယ်. မိနးမတစ်ယောက်ကိုုမှုတ်ပေးဖို.ဆိုတာ တစ်ခါမှမတစ်ခါဖူးတဲ. ယင်ကောင်.Aတွက်တော်တော်ဝန်လေးနေတာပေါ.ဗျာ…။“ယင်ကောင်…မမနုကိုပြန်လုပ်ပေးလေကွယ်…”မမနုမနေနိုင်တော.ဘူးနဲ.တူတယ်…။နုတ်ကနေဖွင်.ပြောလာတယ်။“Aင်း…ဟုတ်ကဲ. မမနု”“ဘာလဲ…ယင်ကောင်ကမမနုကိုရွံလို.လား…ယင်ကောင်.တုန်းကမမနုကောင်းေAာင်လုပ်ပေးထားတယ်လေ”“မဟုတ်ပါဖူးမမနု၇ယ်…လုပ်ပေးမှာပေါ.”ပြောမယ်.သာပြော၇တယ်…တစ်ခါမှမမှုတ်ဖူးတော. နဲနတော.ရွံသလိုပဲဗျ။ဲကဲ…ဒီAခြေAနေေ၇ာက်မှတော.မထူးတော.ဖူးဆိုပြီးယင်ကောင်မမနု၇ဲ.ပေါင်နှစ်ဖက်ကြားထဲကိုခေါင်းဝင်လိုက်တယ်…။ ဟုတ်တယ်လေ…ကိုယ.တုန်းကသူလည်းမရွမရှာလုပ်ပေးထားတာပဲဟာ…။်ံမမနုရဲ. စောက်ဖတ်ကြီးကယင်ကောင်.၇မက်စိတ်ကိုနိုးကြွစေတာ Aမှန်ပါပဲ။ မို.မောက်နေတဲ.ဆီးခုံပေါ်မှာုညိုတိုတိုAမွှေးတွေက ခပ်ေ၇းေ၇းလေးပေါက်နေတယ်။ Aဲဒီ၇ဲ.ေAာက်ကမှတင်းပြီးပြောင်နေတဲ.စောက်ပတ်နှတခမ်းသားနှစ်ခု….။ ယင်ကောင်စောက်ပတ်နှတ်ခမ်းသားနစ်ခုကို လက်နှစ်ဖက်နဲ.်ဆွဲဖြဲလုကတယ်..။ ပြီးတော. ပေါ်လာတဲ.စောက်စိနီညိုေ၇ာင်လေးကို လျှာနဲ. တစ်ချက်ိ်Aပြားလိုက်ယက်လိုက်တယ်….။“Aား….ရှီး…..”ဆိုပြီး မမနုနှတ်က Aသံတွေထက်ကျလာတယ်…။ မမနုဟာAသားဖြူသူဖြစ်တော. မမနူ၇ဲ.ွစောက်ပတ်ထဲကထွက်လာတဲ. Aရည်တွေဟာလည်း ယင်ကောင်.မေးစေ.မှာပေပွကုန်တာပေါ.။ယင်ကောင်လျှာကိုAပြားလိုက်ဖြေးဖြေးလေးAချက်၂၀ လောက်ယက်ပေးလိုကတယ်…။်ပြီးတော. မမနု၇ဲ.ခပ်မာမာလေးဖြစ်နေတဲ. စောက်စိ မကြီးမသေးလေးကို သကြားလုံးစုပ်သလိုတပြွတြ် ပွတ်နဲ.စုပ်ပေးလိုက်တယ်…။ ၅ချက်လောက်စုပ်ပေးAပြီးမှာတော. မမနုပါးစပ်ကAသံစုတွေထွက်လာတယ်…။ံ“Aင်း….ဟင်း…ဟင်း…ကောင်းတယ်ယင်ကောင်၇ယ်….Aဲဒီလိုလေး….Aဲဒီနေ၇ာလေးကိုနာနာလေးစုပ်ပေးစမ်းပါ….”“နောက်တဆင်.Aနေနဲ.ယင်ကောင်.လျှာကို မမနု၇ဲ. Aပေါက်ထဲကိုထိုးAထည်.မှာတော. မမနုဘယ်လုမဟန်မဆောင်နုင်တော.ပါဘူး။ ယင်ကောင်.ခေါင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ. စုံကိုင်ပြီးယင်ကောင်.မျက်နှာကှိုိသူ.စောက်ပတ်နဲ.Aတင်းဆွဲကပ်တာများယင်ကောင်တယောက် Aသက် ရှုတောင်၇ပ်မတတ်ပဲ…။ 13.
ယင်ကောင်.လျှာကိုAပေါက်ထဲမှာ ၄၅၆ ချက်လောက်မွှေပေးလိုက်တဲ.Aခါမှာတော.“Aင်း…..ရှီး….Aား…ယင်ကောင်….မမနုမ၇တော.ဘူး….ပြီးချုင်လာပြီ”ပြော၇င်း ….မမနုခါးကေAာက်ကAိပ်ယာနဲ. တစ်ပေAကွာလောက်ကိုမြောက်တက်လာပြီး ဆတ်ကနဲကော.သွားတယ်…။ပြီးတော.Aိပ်ယာပေါ်ကို ၀ုန်းကနဲပြန်ပစ်ကျသွားတယ်…။ဟုတ်ပါတယ်….မမနုတစ်ခါပြီးသွားပါပြီ။ မမနု၇ဲ.စောက်ပတ်ကြီးဟာလည်း A၇ည်တွေနဲ.တင်းပြောင်နေတာပေါ.။ ယင်ကောင်.လန်ကျောက်ကလည်း တင်းတောင်နေတာပေါ.။ယင်ကောင်လည်းဘယ်နေနိုင်တော.မလဲ….။မမနုပေါင်ကြားမှာခြင်္သေ.ထိုင်ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး လန်ကျောက်ကိုမမနု၇ဲ.စောက်ပတ်A၀မှာတေ.လိုက်တယ်….။ ပြီးတော.မမနု၇ဲ.ခါးလေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ.စုံကိုင်ပြီးလန်ကျောက်ကိုဖြေးဖြေးချင်းသွင်းလိုက်တယ်….။ မမနုရဲ. စောက်ပတ်ဟာAမြင်မှာကြီးသလောက်Aပေါက်ဝလေးကတော. တော်တော်ကျU်းပါတယ်…။ ကျပ်လုံးလောက်ပဲလုံးပတ်ရှိတဲ.ယင်ကောင်လန်ကျောက်တောင် တော်တော်လေးသွင်းယူ၇တယ်။ ဒါတောင်A၇ည်တွေထွက်နေလို.။ကွမ်းသီးခေါင်းAကျော်လောက်သွင်းAပြီးမှာတော. မမနုကေAာက်ကနေချြေထောက်နှစ်ချောင်းနဲ.ယင်ကောင်.ခါးကိုဆွညှပ်လိုက်တယ်….။ AဲဒီAခါကျမှပဲလန်ကျောက်ကလည်းရှောကနဲ ဖြောင်.ဖြောင်.တန်းတန်းဝင်သားတော.တယ်။ မမနု၇ဲ.နွေးထွေးနူံးညံ.လှတဲ.ွစောက်ပတ်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကနေယင်ကောင်.လန်ကျောက်ကိုပေးနေတဲ.A၇သာဟာတော်တော်ကိုကောင်းလှပါတယ်…။ ယင်ကောင်ဖြေးဖြေးချင်းဇိမ်ဆွဲပြီး လန်ကျောက်ကို A၇င်းထိဆွထုတ်လိုက်Aဆုံးထိဲပြန်သွငးလိုက်နဲ. Aလုပများနေတာပေါ.။ ယင်ကောင်သွင်းလိုကတဲ.Aချိန်မှာမမနုကလည်း်သူ.ခါးလေးကိုချိန်သားကိုက်ကော.ကော.ပေးနေတော.လုပ်နေ၇တဲ.ယင်ကောင်Aတွက် A၇မ်းကောင်းတဲ.ကာမA၇သာတွေဟာ မမနုရဲ.နွေးထွေးနူးညံ.တဲ.စောက်ပတ်နံ၇ံတွေကနေ လန်ကျောက်ဆီသို.Aဲဒီကမှတဆင်. Uီးနှောက်ဆီသို.တဆင်.ချင်းေ၇ာက်နေတာပေါ.။မမနုလည်းတော်တော်ကုA၇သာတွေ.နေပုံပါပဲ….။ိမျက်လုးလေးကိုမှေးစင်းပြီးယင်ကောင်.်ဆောင်.ချက်နဲ.Aညီ Aချက်ကျကျပြန်ကော.ပေး၇င်းံဇိမ်တွေ.နေလေရဲ.။ Aချက်၅၀လောက်ဆောင်.Aပြီးမှာတော. ယင်ကောင်မနေနိုင်တော.ဘူး….။မမနုကိုယပေါ်ကိုမှောက်ချပြီး မမနုပခုံးနှစ်ဖက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ.စုံကိုင်ပြီးAားပါတဲ.်ဆောင်.ချက်တွေနဲ.ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင်.တော.တယ်။“Aင်း….Aား…..Aင်း….ကောင်းလိုက်တာ….ယင်ကောင်၇ယ်….ကောင်းလိုက်တာ…မမနုနောက်တစ်ခေါက်ပြီးချင်ပြန်ပြီ…ခပ်သွက်သွက်လေးဆောင်.စမ်းပါ…”ပါးစပ်ကနေတတွတ်တတ်ပြောနေတဲ. မမနု၇ဲ.ခြေထောက်နစ်ချောင်းဟာလည်းလေထဲမွှာဟိုဒီ၇မ်းလို.ပေါ.။ယင်ကောင်လည်း Aချက် ၂၀ လောက် Aားနဲ.မာန်နဲ.ခပ်ပြင်းပြင်းလေးဆောင်.ချလိုက်တယ်….။ ကောင်းလိုက်တဲ.A၇သာဗျာ….။ဆွေမျိုးကိုမေ.ေ၇ာပဲ….။“ယင်ကောင်ပြီး၇င်မထုတနဲ.နော်…မမနုAထဲမာပဲပြီးလိုက်သိလား…A၇သာပျက်လို.”်ှမမနု စကားAဆုံးမှာတော.ယင်ကောင်နောက်ဆုံးAလုံးကြီးကို ပစ်သွင်းလိုက်တယ်။Aဲဒီတစ်ချက်မှာတော.မမနုလည်းတော်တော်ထိသွားပုံ၇တယ်…။ 14.
“Aင်း…” ကနဲေAာ်ပြီးယင်ကောင်.လန်ကျောက်ကို သူ.၇ဲ.စောက်ပတ်နံ၇ံနှစဖက်နဲ.ဆွညှပ်လိုက်တယ်…။်ဲယင်ကောင်လည်းဘယ်ခံနိုင်တော.မလဲဗျာ….။လန်ကျောက်က တမံကျိုးသလိုထွက်လာတဲ.A၇ည်တွေကိုမမနုစောက်ပတ်ထဲပန်းထည်.လိုက်တယ်။မမနုလက်နှစ်ဖက်ကယင်ကောင်ကျောပြင်ကို သိုင်းဖက်၇င်းခါးကိုကော.ပေးတယ်။ပြီးတော.မှဖြေးဖြေးချင်းပြေကျသွားတော.တယ်….။ယင်ကောင်လည်းမမနုနို.တွေပေါ်မှာ မျက်နှာAပ်၇င်း Aမောဖြေနေလိုက်တယ်…။မမနု စောက်ပတ်က တစ်ချက်တစ်ချက်ယင်ကောင်.လန်ကျောက်ကိုဆွဆညှစ်နေတာကွိဲုဲA၇သာခံယင်းနဲ.ပေါ.။ ၅ မိနစ်လောက်နှစ်ယောက်သား စကားလည်းမပြောဖြစ်ကြပဲ မချွတ်တမ်းမှိန်းနေကြတယ်…။ ခနလောက်နေတော.မှ မမနုက….“ကောင်းလားယင်ကောင်ဆိုပြီးတိုးတိုးလေးမေးတယ်။“ကောင်းတာမှ…A၇မ်းကောင်း…မမနု၇ယ်”ဆိုပြီး ယင်ကောင်မမနု ပါးကို ရွတခနဲ တချက်နမ်းလိုက်တယ်..။်“ယင်ကောင်နဲ. မမနုသဘောတူညီချက်တစ်ခုတော.ထားချင်တယ်…Aဲဒါဘာလဲဆိုတော.”မမနုကခုတင်ပေါ်မှာထိုင်လိုက၇င်းက ယင်ကောင်.ကိုပြောတယ်…။်“ပြောလေ…မမနု၇ဲ.”ယင်ကောင် မမနုကို နားမလည်သလိုကြည်.၇င်း ပြောလိုက်တယ်။“ယင်ကောင်လည်း မမနုကိုမချစ်နိုင်ဖူး…မမနုကလည်းယင်ကောင်.ကို မချစ်ဖူး…ဒီလိုAခြေAနေမျိုးဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာသွေးသားသဘောA၇ နှစ်ယောက်စလုံးသဘောတူညီလို.ဖြစ်ကြတာ….”“Aဲဒီတော. ”ယင်ကောင်စကားထောက်ပေးလိုက်တယ်။“Aဲဒီတော. ကာ ဒီAဖြစ်Aပျက်ကိုဘယ်သူ.ကိုမှလျှောက်မပြော၇ဖူး”“နောက်ပြီး…မမနုစိတ်ပါတဲ.Aချိန်မှာလည်း ယင်ကောင်.ကို လှမ်းခေါ်မယ်…ယင်ကောင်စိတပါတဲ.Aချိန်မှာလည်း မမနုဆီ လာနိုင်တယ်”်“နောက်တစ်ခုက…ယင်ကောင်ေ၇ာမမနုေ၇ာ တစ်ယောက်ယောက် Aိမ်ထောင်ကျသွားတယ်ဆို၇င်….ဒီဟာကိုမေ.ပစ်လုက်ကြကြေးကွာ”ိရွေး….နိပဟ….ယင်ကောင်.၇င်ထဲမှာဘု၇ားပွလှည်.သလိုပျော်သားတယ်…။်ွဲဒါမျိုးဆိုတာငြင်း၇မှာAားနာစ၇ာကြီးမဟုတ်လား…။ယင်ကောင်ခပ်သက်သွကပဲ….“ဟုတ်ကဲ.မမနု”ွ်“နောက်တစ်ခုက…Aေ၇းကြီးတယ်…သေသေချာချာနားထောင်….” မမနုကဆက်ပြောတယ်…။ယင်ကောင်နားစွင်.နေတယ်…။ “နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော. မမနုAခုကုန်းပေးမယ်…ယင်ကောင်မမနုကိုနောက်ကနေပြီးေAာင်လုပ်ပေး၇မယ်….”ပြောပြောဆိုဆိုပဲ မမနုကယင်ကောင်.ဘေးမှာ ဖင်ဗူးတောင်းထောင်ပေးတော.တာပါပဲ…။ယင်ကောင်လည်း….Aဲဒီိနေ.က ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ.ဆွလိုက်တာ…၃ ချီလောက်ပြီးသွားပြီဲး15.
ဖလက်ပြတော.တာပဲ….ဗျာ။ မမနုလား….သူကတော.မိန်းမမို.လို.ထင်တယ်ဗျ။၅ ချီလောက်တော.ပြီးသွားတယ်လို.တော.ပြောတာပဲ….။ဘိလိယက်ခုံကိုပြန်ေ၇ာက်တော. စိတ်ပူနေတဲ.မချိုကမေးတယ်…။“ဟဲ.ယင်ကောင်Aဆင်ပြေ၇ဲ.လားတဲ.”ယင်ကောင် မချိုကိုပြုံးကြည်.ပြီး …..“Aဆင်ပြေတာမှသိပ်ပြေမချိုေ၇. ”ဆိုတော. မချိုကယင်ကောင်.ကို နားမလည်တဲ.မျက်ဝန်းတွေနဲ.စိုက်ကြည်.နေလေ၇ဲ.။Aဲဒီညနေမှာတော.ပိုကဆံလာပြန်ပေးတဲ.ဘိန်းစားငမျိုးကို ယင်ကောင်နန်းထိုကတော်ဝင်မှာဘီယာA၀လိုက်တိုက်လိုက်ပါတယ်…..။်သူကတော.ဘာမှမသိဖူးပေါ.။ယင်ကောင်ကတော.သူ.ကို ကျိတ်ပြီးကျေးဇူးတွေတင်လု.လေ…..။ိRecommended